Забур 100 CARS - Nnwom 100 ASCB
1Mommɔ ose mma Awurade, asase nyinaa
2Momfa ahosɛpɛ nsom Awurade;
momfa anigyeɛ nnwom mmra nʼanim.
3Monhunu sɛ Awurade yɛ Onyankopɔn;
ɔno na ɔyɛɛ yɛn, na yɛyɛ ne dea;
yɛyɛ ne nkurɔfoɔ ne nʼadidibea nnwan.
4Momfa aseda nhyɛne nʼapono mu
na momfa nkamfo nkɔ nʼadihɔ;
momfa aseda mma no, na monkamfo ne din.
5Awurade yɛ; na nʼadɔeɛ wɔ hɔ daa;
ne nokorɛdie kɔduru awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa so.
ASCB : Nnwom 100